भूमाफियाद्वारा जग्गा कब्जामा लिन अख्तियारको निर्णय समेत किर्ते ! — Imandarmedia.com
भूमाफियाद्वारा जग्गा कब्जामा लिन अख्तियारको निर्णय समेत किर्ते !
अख्तियारका शाखा अधिकृत भूपेन्द्र थापाको नक्कली हस्ताक्षर र ३५२२ को नक्कली चलानी नम्बर राखेर चाबहिलस्थित मालपोत कार्यालयलाई फुकुवाको चिठीसमेत पठाइएको छ।
शाक्यका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरी भएको फर्जी निर्णयको फोटोकपी प्रमाणित पनि फर्जी छ। अख्तियारको निर्णय संख्या (३९२) समेत तोकेर शाखा अधिकृतबाट निर्णयको फोटोकपी प्रमाणित भएको देखाइएको छ।
‘जग्गाहरू रावल आयोगबाट रोक्का राखिएकोमा चाबहिल मालपोत कार्यालयले फुकुवा गरी उजुर नआएमा निवेदकको नाममा नामसारी गरिदिने’ मालपोतलाई लेखिएको नक्कली पत्रमा उल्लेख छ।
आफ्नो नामबाट नक्कली कागजात तयार भएको जानकारीमा आएपछि अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत थापाले अख्तियारको विश्वसनियतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताउँदै दोषीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि आयोगमा प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
अख्तियार स्रोतका अनुसार झुटा निर्णय र पत्र तयार पार्ने कार्यमा संलग्न एक जना बिचौलिया सुमन खड्कालाई समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाइएको छ। उनलाई सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते मुद्दासमेत चलाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट एक वर्ष जेलसमेत ठेकिएको छ।
‘यो गम्भीर विषय हो। यस विषयमा हामी सजग छौं’, अख्तियारका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीले भने, ‘म आउनुभन्दा अघिको घटना रहेका कारण सबै बुझ्न पाएको छैन। तर, यस्तो गतिविधि हुन नदिन हामी सचेत छौं।’
यता, मुलुकभरमा सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिचौलियाको प्रभावबाट जोगिन सतर्कता अपनाएको छ। जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृष्ण नेपालले फर्जी र किर्ते कागजातको चलखेल हुन नदिनेतर्फ सजगता अपनाउँदै आएको बताए।
‘अदालतका नाममा पनि बाहिरबाट किर्ते डकुमेन्ट तयार गर्ने गरेको भनेर सुनेका छौं। यस्तो चलखेलबाट जोगिन हामीले सजगता अपनाएका छौं,’ नेपालले भने। अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।